Dhallinyaro argagixisnimo loo xiray Australia - BBC News Somali
Dhallinyaro argagixisnimo loo xiray Australia
Image caption Australia ayaa horeu u sheegtay in qaar badan oo ka tirsan muwaadiniinteeda ay ku biireen daacish.
Wiil 18 jir ah ayaa Magaalada Melbourne ee dalka Australia waxa lagu soo eedeeyay in uu maleegayay weerar argagixisnimo kaddib markii bileyskla dalkaasi ay qaadeen hawlgallo xilli hore saaka oo sabti ah.
Afar kale oo dhallinyaro ah ayaa iyaguna gacabnta lagu soo dhigay, waxaana bileyska ay sheegayaan in raggaasi dhallinyarada ah ay qorshaynayeen weerar ka dhan ah munaasabadda xuska maalinta dadkii colaadda uga geeriyooday Australia, xuskaasi oo ku beegan dhammaadka usbuuca dambe.
Waxa ay intaasi ku dareen in raggani ay dhiirigelin ka heleen kooxda khilaafada islaamka ama Daacish isla markaana ay doonayeen in ay bartilmaameedsadaan booliska.
Booliska ayaa sidoo kale sheegay in uu xiriir ka dhaxeeyo afarta nin ee dhalinyarada ah iyo wiil 18 jir ahaa oo booliska ay toogasho ku dhileen sanadkii la soo dhaafay kaddib markii uu toorey geliyay laba askari oo boolis ah.